Nyika yakanga yasara inogovewa paShiro (1-10)
Nhaka yaBhenjamini (11-28)
18 Ungano yese yevaIsraeri yakabva yaungana paShiro,+ vakadzika tende rekusanganira ipapo,+ sezvo nyika yacho yakanga yaiswa mumaoko avo.+ 2 Asi pakanga pachiine madzinza 7 evaIsraeri akanga asati apiwa nhaka yawo. 3 Saka Joshua akati kuvaIsraeri: “Mucharamba muchiverengera kuenda kunotora nyika yamakapiwa naJehovha Mwari wemadzitateguru enyu kusvikira riini?+ 4 Ndipei varume vatatu kubva mudzinza rimwe nerimwe ndivatume; vanofanira kuenda, vofamba nenyika yacho yese vachinyora zvayakaita, kuti igovaniswe madzinza avo. Kana vapedza, vanofanira kudzoka kwandiri. 5 Vanofanira kuikamurirana kuti ive migove minomwe.+ Judha acharamba ari munyika yake kumaodzanyemba,+ uye veimba yaJosefa vacharamba vari munyika yavo kuchamhembe.+ 6 Imi nyorai zvakaita nyika yacho, moikamura kuti ive migove minomwe, moiunza kuno kwandiri, uye ini ndichakukandirai mijenya+ pano pamberi paJehovha Mwari wedu. 7 Asi vaRevhi havana mugove pakati penyu,+ nekuti upristi hwaJehovha ndiyo nhaka yavo;+ uye Gadhi, Rubheni nehafu yedzinza raManase,+ vakatotora nhaka yavo kumabvazuva kwaJodhani, nhaka yavakapiwa naMozisi muranda waJehovha.” 8 Varume vaienda kunonyora zvakaita nyika yacho vakabva vagadzirira kuenda, uye Joshua akavarayira achiti: “Endai mufambe munyika yacho, munyore zvayakaita modzoka kwandiri, uye ndichakukandirai mijenya pano pamberi paJehovha muShiro.”+ 9 Varume vacho vakabva vaenda, vakafamba nenyika yacho vakaikamura kuita migove minomwe, vachitsanangura zvayakaita mubhuku maererano nemaguta ayo. Vakabva vadzokera kuna Joshua kumusasa kuShiro. 10 Joshua akabva avakandira mijenya pamberi paJehovha+ muShiro. Ari ipapo Joshua akagova nyika yacho kuvaIsraeri, achipa dzinza rimwe nerimwe mugove waro.+ 11 Dzinza raBhenjamini rakapiwa mugove waro pachishandiswa mujenya, maererano nemhuri dzavo, uye nyika yavakapiwa yaiva pakati perudzi rwaJudha+ nevanhu vekwaJosefa.+ 12 Kuchamhembe, muganhu wavo waitangira paJodhani, uye waikwidza kusvika kumateru eJeriko+ kuchamhembe, wokwidza gomo nechekumavirira, uchipfuurira kusvika kugwenga reBheti-avheni.+ 13 Muganhu wacho waibva ipapo uchienda kuRuzi, kumateru ekumaodzanyemba eRuzi, kureva Bheteri;+ muganhu wacho waidzika uchienda kuAtaroti-adhari+ pagomo riri kumaodzanyemba kweBheti-horoni Yezasi.+ 14 Muganhu wacho waibva kudivi rekumavirira, wopoterera uchienda kumaodzanyemba kubva pagomo rakatarisana neBheti-horoni kumaodzanyemba; waiperera kuKiriyati-bhaari, kureva Kiriyati-jearimu,+ guta raJudha. Iri ndiro raiva divi rekumavirira. 15 Divi rekumaodzanyemba raitangira panoperera Kiriyati-jearimu, uye muganhu wacho waienda nechekumavirira; waienda kuchitubu chemvura cheNeftoa.+ 16 Muganhu wacho waidzika uchienda kunoperera gomo rakatarisana neBani reMwanakomana waHinomu,+ riri muBani reRefaimu+ kuchamhembe, uye waidzika uchienda kuBani raHinomu, uchienda kumateru evaJebhusi+ kumaodzanyemba, uchidzika kusvika paEni-rogeri.+ 17 Waienda kuchamhembe uchinosvika kuEni-shemeshi, wobva wabuda uchienda kuGeriroti, iri pakatarisana nemukwidza weAdhumimu,+ wodzika kuenda kudombo+ raBhohani+ mwanakomana waRubheni. 18 Waipfuurira kuenda kumateru ekuchamhembe akatarisana neArabha, wodzika kuArabha. 19 Muganhu wacho waipfuurira uchienda kumateru ekuchamhembe eBheti-hogra,+ uye waiperera pamhenderekedzo yekuchamhembe yeGungwa reMunyu,*+ panoperera Rwizi rwaJodhani kumaodzanyemba kwarwo. Uyu ndiwo waiva muganhu wekumaodzanyemba. 20 Rwizi rwaJodhani ndirwo rwaiva muganhu wavo kudivi rekumabvazuva. Iyi ndiyo yaiva miganhu kumativi ese enhaka yevana vaBhenjamini maererano nemhuri dzavo. 21 Maguta edzinza raBhenjamini maererano nemhuri dzavo aiva: Jeriko, Bheti-hogra, Emeki-kezizi, 22 Bheti-arabha,+ Zemaraimu, Bheteri,+ 23 Avhimu, Para, Ofra, 24 Kefa-amoni, Ofni, neGebha,+ maguta 12 nemisha yawo. 25 Gibhiyoni,+ Rama, Bheeroti, 26 Mizpe, Kefira, Moza, 27 Rekemu, Ipeeri, Tarara, 28 Ziira,+ Haerefi, Jebhusi, kureva Jerusarema,+ Gibhiya,+ neKiriyati, maguta 14 nemisha yawo. Iyi ndiyo yaiva nhaka yevana vaBhenjamini maererano nemhuri dzavo.